Izindaba ezizolethwa yiWindows 8 (noma yikuphi ukufana neLinux kungokuqondaniseka okumsulwa ...) | Kusuka kuLinux
Izindaba ezizolethwa yiWindows 8 (noma yikuphi okufana neLinux kuqondane nje okumsulwa ...)
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | I-GNU / Linux, Izaziso, Okunye, Kunconyiwe
Ngubani ongayazi iWindows?
Leyo OS ebihlala imboza okwangempela, emuva lapho umbono ubolekwe kuyo Apple, futhi lapho usendleleni kunezibonelo eziningi ongazibeka. Kulungile manje ngokulandelayo Windows 8 Impela kuzoba yimpumelelo, futhi ngisho ngobuqotho ngaphandle kokubhuqa, Windows 8 kuzoba impumelelo.
Ngihlanye? … lutho neze. Kuzoba yimpumelelo yebo, ngoba isebenzise (ikopishwe) imibono (imisebenzi) esevele iphumelele kuma-Linux distros, ngalesi sizathu, uma usebenzisa imisebenzi esevele iphumelele ezweni le-Linux, cabanga ukuthi bekuzokwenzekani uma uphinde ubeke yonke le nkulumo-ze nokwazisa abavame ukuyisebenzisa 🙂
1 1- Isibonelo, sinezindaba eziphathelene nokukopisha:
2 2- Buka kuqala amafayela aphindwe kabili kukhophi:
3 3- Windows 8 ku-LiveUSB.
4 Ukuhlanganiswa kwe-4- Cloud.
5 5- Uhlelo lwefayela olusha.
6 ..- UKUGCINA
1- Isibonelo, sinakho izindaba maqondana nekhophi:
Akukuhle lokho? Sure ... impela, kumane kwaqondana nje ukuthi kubukeke kanjena:
Amakhophi amaningi ahlanganiswe ewindini elifanayo, imininingwane yamakhophi kanye nokungeza ihluzo ... kumane kwaqondana 🙂
2- Buka kuqala amafayela aphindwe kabili kukhophi:
Kule nguqulo ye-Windows bayipholishe, bavumela ukuphatha amafayela amaningi ngasikhathi sinye futhi lokhu, ukuthembeka, ukuhlanganisa. 🙂
En Windows 7 wayenomqondo ofanayo, ofana ngokumangazayo nalokho okukhona ku- KDE isikhathi eside:
3- Windows 8 ku-LiveUSB.
Njengoba kukhonjisiwe kufayela le- isiza se HP:
Manje iMicrosoft ithatha umqondo wohlelo olusebenzayo luye kwelinye ibanga.
Manje iMicrosoft ithatha umqondo we-Living Operating System uye kwelinye ibanga elisha.
… Awekho amazwana… ¬_¬ ...
Ukuhlanganiswa kwe-4- Cloud.
Manje Microsoft kuzokuvumela ukuthi ugcine idatha yakho ku- I-SkyDrive. Ngama-25GB esewonke ongawasebenzisa, lapho ungagcina hhayi umculo nezithombe kuphela, kepha imininingwane nge-akhawunti yakho yomsebenzisi nokuningi.
Woza, ukuthi ubukhona / umqondo we Ubuntu One Kungokunye kokuhlangana kwempilo, okuthi njengokubi kusinikeze isikhala samahhala esingu-5GB kuphela, futhi cishe u- $ 2.99 ngenyanga sizoba nokuningi okungama-20GB.
Manje, ngokombono wami uqobo ... ukugcina okuqukethwe kwe-multimedia akubonakali kukubi kimi, kepha ... ukugcina othintana nabo, amaphasiwedi nokunye njll efwini, kubonakala sengathi kuyasangana lapho.
5- Uhlelo lwefayela olusha.
Iprotokhon, isistimu entsha yefayela ezothutha I-NTFS izovela ku- Windows 8.
Ngokusho ITWorld, lolu hlelo lufana ne- I-ZFS (i-Z File System) kanye ne- Ama-Btrfs.
Angazi ngawe, kepha empeleni ngingathanda ukuba nengxoxo ubuso nobuso nomakhi othile weMicrosoft, enye yalezi Kakashi-sensei (uhlamvu oluvela ku-anime Naruto ogama lakhe lesidlaliso lingu-Copy-Ninja) ukubona ukuthi bazoyiphendula kanjani imibuzo yami ¬_¬
Uyazi ukuthi yini ezongiqhatha? ...
Lokho iMicrosoft ayikasunguli ngempela, ukuthi 'iboleke' kuphela imibono / okuhlangenwe nakho obekukhona emhlabeni isikhathi eside, kepha ekugcineni kuzothatha udumo futhi kuvele njengo: 'IWindows8, i-OS eguqula amasistimu asebenzayo»...
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Izindaba ezizolethwa yiWindows 8 (noma yikuphi okufana neLinux kuqondane nje okumsulwa ...)
Amazwana ayi-156, shiya okwakho
IWindows 8 kungenzeka iguqule umhlaba we-OS, kepha umhlaba wayo uqobo. Ngibe umsebenzisi weWindows XP, Vista (okwedlulele), 7 no-8 (Ukuhlola kuqala Konjiniyela). Kepha ngokuqhathanisa ulwazi lwami njengomsebenzisi weWindows neLinux, alunakuqhathaniswa, futhi bengingumsebenzisi weWindows iminyaka engaphezu kweLinux, kepha le minyaka yeLinux ibe nezithelo eziningi kakhulu kunaleyo yeWindows.
Manje enye ingxenye, kuyinto ejwayelekile ukuthi iMicrosoft inqume ukukopisha umhlaba weLinux, ibivele ibonwa ngeVista, nemiphumela yayo, ikhophi eyize yemiphumela emihle yeKDE, Compiz…. Futhi ngikhuluma ngemiphumela ngoba yilokho umsebenzisi wokugcina akubona kakhulu.
Okuthunyelwe okuhle, nokuqhathanisa okuhle kakhulu.
Yilokho kanye okwenzeka kimi. I-Linux kule minyaka embalwa ingifundisile (ngiphoqelekile ezimweni eziningi) ukuthi ngicabange, ngithuthukise ukucabanga okusekelwe emqondweni, ukuxazulula izinkinga zami, futhi ... Ngithanda ukucabanga ukuthi ngikhonze umhlaba okuthile, okungenani kancane nginikele 😀
Woza Kage, ungalwi. Uyazi ukuthi umhlaba usebenza kanjani. Vumela abasebenzisi beWindows bakholwe ukuthi banokuthile okusha okusha ngoba ekugcineni kuyiqiniso, bayakwenza, okuthathe iminyaka engaphezu kwengu-15 ukuthi iguquke, kufaka phakathi izinto ebesinazo ku-GNU / Linux nakuma-desktops abo. Isisho sithi: Kungcono ukubambezeleka kunanini ngaphambili.
Ukuthi nje kuyangikhathaza ukuthi kuzokwenzeka njengaku Windows Vista ... IMicrosoft ibiyiLAST ukuthi ibe nokukhanya, futhi abasebenzisi bacabange ukuthi kuhle impela, ukusetshenziswa kwayo bekuyihlaya LOL!
Kungaba owokugcina kulokho, kepha yilona kuphela uhlelo olwazile ukwenza i-OS iqale ngaphansi kwemizuzwana emi-2, futhi siyavuma futhi ukuthi iLinux ikude kakhulu ukusetshenziswa ngumsebenzisi ojwayelekile.
hhayi ngoba i-linux iyi-OS yamahhala iyona ehamba phambili emhlabeni ngoba kunezici eziningi eziyithonyayo futhi enye yazo ukusebenza, ukuzinza nokusebenziseka kalula.
Ziphinde zibe nomthelela ekuzinzeni (njengoba usho) nokuphepha, futhi iWindows iningi ayinakho lokhu, bona ukuthi ngabe kunjalo yini kumaseva (lapho izinto eziyinhloko ukuzinza nokuphepha) iWindows ngokungangabazeki ideleleka kakhulu.
Ukhuluma nami ngozinzo angikaze ngibone i-linux ezinzile empilweni yami yonke, ku-linux uma kungeyona into enye kungenye, amasistimu ashintshile futhi abona ukuthi i-linux isalele emuva kuphela inemiphumela ekuvikelekeni kwe amaseva ayo, nokuphepha muva nje ku-microsoft kukhuphukile.
Abaduni baphawula ukuthi i-linux yesizathu uhlelo oluvikelekile kungenxa yokuthi abazamile ukuyihlasela.
I-linux yenzelwe abasebenzisi abangochwepheshe futhi kuyiqiniso, ukufaka uhlelo olulula kufanele wenze izinto eziningi isitolo sesoftware ubuntu sizamile ukushiya lokho ngemuva kepha i-terminal isasetshenziswa kakhulu.
Isibonelo esicacile sokuqina nokusetshenziswa kalula yiWindows 7, enekhono lokuzilungisa ngaphandle kwesidingo seCD. Kuyinto ebalulekile iWindows enayo futhi ebaluleke kakhulu futhi iyintsha. Ku-Linux ukhululekile ukudala nokwenza konke okufunayo, kepha noma kunjalo akuyona uhlelo olulula kakhulu ukulusebenzisa kubasebenzisi abajwayelekile.
Ngiyakutshela ngokuhlangenwe nakho kokusetshenziswa futhi ngaphandle kwawo wonke umonakalo engiwusebenzisayo nge-linux ngezikhathi ezithile ukuthola ukuthi ngabe bawalungisile yini amaphutha abo.
@Itachi Angazi ukuthi ukuthathaphi ukuthi iLinux ayizinzile nokuthi inamaphutha ... empeleni, angazi ukuthi ukuthathaphi lokho "iWindows izinze kakhulu futhi iyazilungisa" Yini isihogo? Woza ndoda, ungabi umlandeli onje, ngingathanda ukuthi iWindows izilungise ngaso sonke isikhathi uma iphuka. Empeleni izolo ngaphandle kwencazelo ifayili leSystem 32 lilimele ku-pc kamakhelwane wami futhi manje akafuni nokuqala iWindows kwiCD futhi, ngomlingo, uXubuntu uyaqala ...
Ingabe isigebengu sakusho lokho? Ngemuva kwalokho khuluma nowangempela ngoba isizathu asibangelwa ukuntuleka kokuhlaselwa, kungenxa yokuntuleka kwamakhono; iphephe kakhulu kune-Linux kuphela i-BSD.
nano Ngikhuluma ngokuthi i-linux ayizinzile kulwazi engibe nalo nayo futhi konke ukwabiwa kwayo kulinyazwe yinoma yini kungekho sidingo samagciwane we-linux ukukhiqiza amaphutha, angimelene nesoftware yamahhala kepha ngimelene nabantu abonakalisa umsebenzi omuhle yezinye izinkampani okuthi noma ungazifuni zingaphambili, isoftware yamahhala ingenye indlela kepha ayihlali iyisixazululo sayo yonke into, futhi uma ubungazi ukuthi amawindi 7 alungiswa kabi kuphela, uma ngabe ubungazi ukuthi kukhona into ebizwa ngokuthi isipele noma isipele eshiya amawindi akho elungiswe ngokuphelele. noma lapho ungasebenzisa isiqandisi.
@Itachi Alukho uhlelo lomuntu olungenamaphutha, kungaba ngamanga uma ngingakutshela ukuthi akukho okungahambi kahle ngaso sonke isikhathi ku-GNU / Linux njengoba abanye abantu kwesinye isikhathi bezama ukukwenza ukholwe, kepha isitatimende sakho sonke siyazenzisa, Ngiyakucela ukuthi ungakhulumi ngokungathi akekho lapha ongazi ukuthi yini iWindows futhi engabazi ubuhle nobubi bayo.
Ngisebenzise iWindows kusuka ku-Windows 98 kuya ku-Windows 7, hhayi njengokufuna ukwazi, kepha njengomsebenzisi wansuku zonke, cishe njalo ngamalayisense wangempela futhi unyaka bengisebenzisa i-GNU / Linux kumishini yami yangasese kepha ngisaqhubeka nokwenza isondlo nokulungisa iWindows yokusiza engisebenza nabo nomndeni wami. Ngokweqiniso angifuni ukukhala ngikhumbula wonke amaphupho amabi engangibangwa yi-Deep Freeze, uhlelo olubuyisela amaphuzu avuselela i-malware eningi ebiza kakhulu ukuqeda, i-UAC okuthi lapho iphuma ibonakale iyinto ewusizo kepha empeleni kwesithiyo, i-antivirus (yamahhala noma ekhokhelwayo) ebamba noma yini enye ngaphandle kwezimbungulu neminyaka eminingi kangaka yomunyu.
Ekugcineni ngigcine ngokufaka wonke amathuluzi wamahhala ku-Windows ebengingakwazi ukuwenza, ngaleyo ndlela ngihambisa nge-90% Freeware nanoma iyiphi enye indlela yokukhokha engeyona i-OS uqobo, ngenqaba futhi ngivimbe zonke lezo zimangaliso okhuluma ngazo cishe njalo ukwedlula noma yini bavimba futhi banciphisa uhlelo ngokuthi ukuhlala kwami ​​ku-Windows kube nesizotha, kuze kube sekugcineni, kusukela osukwini olulodwa kuya kolandelayo ngazitshela, Kungani ngingashintshi i-OS uma ngisebenzisa izinhlelo ezifanayo futhi ngiqeda ukuzikhipha lapha? Ukushintshela ku-GNU / Linux kuyisinqumo esinengqondo uma usihlola ngobuqotho isimo, bona ukuthi wenzani, bese uqala ubone ukuthi i-hardware yakho iyahambisana (hhayi ngenxa yenkinga ye-Linux, kodwa ngenxa yemfihlo yomkhiqizi). Ngale ndlela, abanye abantu abangenalo ulwazi lokusebenzisa ikhompyutha ngaphezu kokuchofoza kabili manje basebenzisa amasistimu wamahhala usuku nosuku ngenxa yokuthi ngiyifakile futhi nginezinkinga ezimbalwa kakhulu ngisebenzisa imishini yabo ukuzijabulisa, ukufunda noma ukusebenza, Ngaphandle kokuthi uhlelo oluthile lwenzelwe iWindows kuphela futhi aluzinzile ukusetshenziswa kuma-distros we-GNU / Linux engiwafakayo.
engaziwa kubasebenzisi ukusetshenziswa okulula kakhulu okubaluleke kakhulu futhi obekulokhu kubaluleke njalo ukuba nohlelo "oluzinzile" njengeGnu / Linux ngamathuba amaningi enawo ngesikhathi sokusetshenziswa kunqunyelwe entweni ebaluleke kakhulu, ukuxhumana abasebenzisi, i-Gnu / Linux imvamisa yakhelwe ngendlela ejwayelekile ukuze umsebenzisi oyisazi ayinikeze ukubukeka kwayo nendlela yayo yokusebenzisa, kepha kuyaziwa ukuthi i-OS enokuxhumana okungcono nomsebenzisi ihlala iwina ngoba yilokho zifuna kwisoftware.
Singasho ukuthi i-Gnu / Linux inezinzuzo eziningi ezingeni lesoftware, kepha ukusabalalisa okusebenzisayo akukhululekile ngokuphelele, wena ngokungaziwa osebenzisa iDebian kufanele wazi ukuthi akuyona ukusatshalaliswa kwamahhala okungu-100% ngoba i-kernel yayo inezingxenye zekhodi yokuphathelene ayiguquli.ku-OD yamahhala kepha ngumthombo ovulekile. Njengamanje, iningi lezinhlelo zokusebenza esizibheka njengezikhululekile zinezingxenye zesoftware ephathelene ngoba ziyadingeka ukugcina ukuzinza okuthile futhi ngoba ukubuyisela emuva isoftware kunzima kakhulu, kusenentuthuko enkulu eGnu / Linux, kukhona izikhala eziningi okufanele zigcwaliswe futhi Okukodwa kwalokhu ukuxhumana nomsebenzisi, okusuka ekufakweni kohlelo kuye ekufomethweni, nokusheshiswa kwehadiwe kudinga ukusetshenzwa kakhulu, impela azikho izinkinga ngabakhiqizi ngoba kukhona abashayeli beGnu / Linux futhi eziningi zintula ukuqaliswa okuhle kokusheshisa. zehadiwe, lezi yizinto ngokwazo ezenza enye i-OS ibe nenzuzo ethe xaxa. Uma ufuna ukwazi ukuthi iziphi izinhlelo zamahhala zeGnu / Linux eziza kuzo http://www.gnu.org/distros/free-distros.es.html uzokwazi ukuthi ngisho no-Ubuntu obathandwa kakhulu akhululekile nje
IWindows ihlale iphahlazeka "ngaphandle kwencazelo" ku-PC yalabo abakulungele ukusebenza abafuna ukuthi bakusekele ngezobuchwepheshe (noma bakusebenzise njenge-sucker njengoba kungenzeka).
Futhi uma leyo disk ibingafuni ukubhampa, mhlawumbe ngukuthi ibonakele njengoba amadiski evame ukonakala, noma usho ukuthi iWindows "yonakele kuphela" ezindaweni zombili ngasikhathi sinye?
Kepha izinganekwane zasemadolobheni ngaphandle kweWindows akuyona leyo nto ephula imilingo (noma engeyona imilingo) nsuku zonke.
Ukuntengantenga okwengeziwe ngalowo mqondo ngikubonile kuma-distros, kunokuvuselelwa ne-bang ukukufometha noma ukukuphonsa ngempelasonto kulungisa konke, noma kuvule uhlelo lokusebenza nokuphahlazeka kohlelo lwehluzo.
Uma ulikhiphile igciwane phambilini, ngeke usebenzise uhlelo lokubuyisela emuva kwalokho, njengoba kusho isisho, liyini iphutha lesigxobo uma iselesele ligxuma lize lishayeke.
Futhi yehlisa umoya, ukuthi uma ngelinye ilanga i-GNU / Linux isetshenziswa kakhulu futhi ikakhulukazi uma ine-Private Software (ne-craks), uzobona ukuthi i-malware ifika kanjani. Ungezi kimi nalokho «okungenakwenzeka nokuphepha okuphezulu kohlelo olukhulu» ngoba ngaphezu kokuqamba amanga, into efanayo eyashiwo ama-maqueros futhi lapho unayo, kulokho kunabantu abaningi kunamehlo amaningi abonayo (ngenhloso embi) nokuthola izikhala futhi ngaphezu kwakho konke ukuthola abantu abazofaka amahhala. Into ehlekisayo ukuthi labo abahlekisa ngokwehluleka kwama-maqueros kakhulu ngabasebenzisi beLinux futhi bona ngokufanayo.
Futhi qaphela ukuthi akuyona into engavamile ukuthi lapho abantu beyeka ukuqhekeka futhi bazi ngokwengeziwe ngalokho abakufakayo nabangakufaki, "iWindows ithuthukisa ngomlingo."
Akuyona i-Free Software noma i-Open Source. Umthombo ovulekile ephepheni ufana neFree Software (kepha ngaphandle kweStallman); Yize leli gama libhekisela enkululekweni eyodwa, ukuthunyelwa kwalo kufaka phakathi konke okune futhi ngokwaziwa kwalo akukho okunye okukhomba noma okungeziwe okusho ukuthi "Umthombo Ovulekile Ungumthombo Ovulekile Nekhodi Evaliwe" okungaba mbudane ongenangqondo futhi amaligi ngibonile ukuthi kungaba yinto ephoqelelwe ukwenza kube lula. Bakusungulile lokho ngokuhamba kwesikhathi, kepha akuyona into enganqunywa ngqo kusuka ezincwadini zabo, okungukuthi, "ukusebenzisa Umthombo Ovulekile noMthombo Ovaliwe" akuyona into ehlotshaniswa ngokomqondo nefilosofi yoMthombo Ovulekile, kunalokho okuphambene nalokho.
Ngaphandle kokusebenzisa noma yini ngoba ithanda / isebenza yilokho okwenziwa yinoma ngubani ongaqapheli imibono evulekile noma yamahhala; Akudingeki ube "nesihloko" esikhethekile salokho, ingasaphathwa eyokuthi isihloko kufanele sibe "Umthombo Ovulekile" ngoba bayaphila ukukubeka su igama kusimo esijwayelekile.
Uqinisile ezintweni eziningi. Ngicabanga ukuthi akuyona isoftware yamahhala noma isoftware ephathelene naleyo eyenza ukuthi ikhompyutha yethu ibukeke kabi noma yinhle, iyilokho esikufakayo ngenkathi sikwiGnu / linux, Mac noma iWindows esizokwazi ukuthi ukusebenza Uhlelo Lulalela imiyalo yezinhlelo, i-OS, noma ngabe yini, umlamuli kuphela onikeza izinsiza kuzinhlelo ezizokwenziwa, kumane nje kunjalo. noma ngabe uyiklama kanjani, kepha into ebalulekile ukuthi igxile kubani. Kuhle ukwazi ukuthi iningi labasebenzisi liya ku-Windows ngalokhu kusetshenziswa okulula elikunikezayo, enye i-OS inikeza ukusetshenziswa okulula kepha igxile kubasebenzisi abangochwepheshe ngakho sichitha isikhathi sigxeka iWindows namanye ama-distros uma ngamunye enza umsebenzi kwikhompyutha yamanje .
Yebo, ngemizuzwana emibili inqobo nje uma uthenga umshini wobisi wakamuva onamandla amakhulu. Uqhathanisa amawindi ne-linux kuma-PC ajwayelekile futhi uzobona, ngiyakutshela ngoba ngazama endlini yomngani ukufaka i-archlinux ku-eeePC futhi izoqala ngemizuzwana eyi-10, futhi ibine-gig yenqama ne ama-cores ambalwa, noma ngabe kungenxa yazo zombili i-hardware, futhi ngokuqinisekile amawindi bekuzothatha isikhathi eside. Lokho wukuthi, engizokuya ngakho ukuthi akunangqondo ukuqhathanisa ngaphandle kwezethenjwa. Yebo, amawindi aqala ngemizuzwana emi-2…. kukhompyutha engama-3000 euros xD
Ngisebenzisa windows futhi angikukholwa, okungenani emawindini kuyaziwa ukwamukela ukuthuthuka kusuka kolunye uhlelo, ngizamile i-linux neqiniso ... kufanele bazi ukuthi bangakwamukela kanjani noma bakopishe, njengoba uthanda, kepha kunendlela ende okufanele ihambe, nayo windows 8 Isebenza ngokushesha futhi nginawo wonke amathuluzi engiwadingayo, kuLinux kunamathuluzi ayisicefe kakhulu ukufeza okufanayo naku-Windows.
Iphoyinti 3 angazi noma ukuhlekisa noma ukufaka i-pokerface kuphela, futhi okubi kakhulu ukuthi kuzoba khona labo abakholelwa ukuthi bawuguqula umqondo ¬_¬
Futhi ukusho ... kuzofana noChristopher Columbus, ogcinwe emlandweni njengalowo owathola umhlaba "omusha", lapho wawungekho ngisho eduze kwakhe hahaha.
Akusikho okokuqala noma okokugcina ukuthi bazokopisha izinto kusuka kwiLinux noma iMac.
Manje sengiyifundile le ndatshana
Bona ukuthi ngabe iRAE yakho iyavela - »GFYS 😉
Haha ama-windoleros azoba nobuso nalesi sihloko ... Hahaha
Futhi ngithi, azikho yini ezinye izibonelo ezingekho ngezithombe zabesifazane? Khumbula ukuthi akuthandeki wonke umuntu ...
Lona .. uma ukhetha izithombe zomuntu onqunu, ungazisa .. ukuthi u-El Arenoso uzifaka kuwe ngentokozo .. Hhayi uma ngithi usho kanjalo, bese usola ubisi lwakho olubi ngokuthi awunikezeli ' nginentombi ... ¬¬
Landa ividiyo ebabayo ebusuku ukuze uqonde ukuthi kungani kungcono uma engenayo intombi.
Sengivele ngikutshele ukuthi ukufaka izithombe zobabekazi kukhompyutha yi-reggaeton enonya
Futhi ubeka ama-avatar abesifazane ukuthi indoda ivela kumaFrench Dofusers, akunjalo? i-xD
Lapho ngathatha umuzwa phakathi kwezinye izinto
Yebo, nganginezithombe zobabekazi esikrinini ngaphambi kokuba kusungulwe i-reggetón. Futhi ngerekhodi, angiyena umlandeli walowo mculo-mbumbulu.
Sengikushilo ngoba i-reggaetoneros imvamisa iyona enesihluku esikhulu.
Noma kunjalo, i-KZKG ^ uGaara uyayithanda i-reggaeton (noma engathi cha)
Akunandaba ukuthi ngiyibuka kangakanani le vidiyo, angikwazi ukuyeka ukucabanga ukuthi usebenzisa izaba ezingenangqondo nezobuntwana ukuze "uvale" ongabathandi abesifazane. Wozani, ingabe unengqondo noma okuthile? Ngubani okutshele ukuthi uma ucasukela umuntu wesifazane, uzobashaya noma ubabulale? Woza mfana omncane, lolo laka olubi othi unalo alukwenzi ngisho nokuba ube ngumbulali, akulona iqiniso lokuthi awunantombi nenani leminyaka onayo laphaya phezulu. Futhi ukukuphendula, kuyiqiniso, akuyona yonke into eyezocansi kepha woza, uma unayo awufuni ukushiya hahaha
Silapha, kuzomele ungibone, uma ungangiboni awazi ukuthi ngingathukuthela kanjani nokuthi yini engingayenza.
Lezo zizathu azibonakali ziyisilima kimi. ngaphandle kokuthi angishongo ukuthi angibathandi abantu besifazane, ukuthi usungule wena, futhi angisiye owozwela wobungqingili njengoba ngichazile izikhathi ezimbalwa.
Ngakho-ke ubona kuphelele ukuthi lapho ngicasukile, ngiphonsa okuthile kumkami, ngimshaye ekhanda ngimshiye eyisiphukuphuku impilo yonke, lokho kumnandi, akunjalo? Kuhle lokho.
Ngokusho kwakho, kungcono ukuthi abe nentombi noma ngabe uyishaya ngokuthile kunokungabi nayo, awu, angiqondi ...
Manje kuthiwani uma Isibindi sithanda amaphuphu noma cha? Usuvele ulahla ukungcola ngakolunye uhlangothi lapho mhlawumbe kungekho umdlalo ozoya ku (Asexual) ngingu-bi futhi akekho lapha okhonondile, ngiye ngaba yindlela "enhle" (eyodwa nje ethi xD) ngicabanga ukuthi nginentombi engu-LOL ( futhi ngalokho nginqobile noma bacabanga nokuthi ngingumalume we-LOL)
Kepha qhubeka, qhubeka ... Into emnandi nge-inthanethi yidrama ne-trolling xD
HAHAHA lutho kithina, kepha ... kumthinta kanjani ukuthi simcabangise ngaye, kahle-ke lapha siya khona futhi ukumfuna nje, siyaphinda HAHA 😀
Nah Alba, nathi akukho ukungcola… okungukuthi, wonke umuntu unelungelo lokuba nanoma ngubani amfunayo, inqobo nje uma kunenhlonipho ngijabule kakhulu, futhi nginesiqiniseko sokuthi i-elav nabanye bacabanga okufanayo.
Ngizama ukuziphatha kahle, hhayi ukusikhuza kakhulu isibindi ngoba ngiyavuma ukuthi kwesinye isikhathi bengichitha kancane 🙂
Ngiyabingelela futhi kuyintokozo ukukufundela lapha futhi ^ _ ^
Lapho mhlawumbe engayi kunoma yimuphi umdlalo (i-Asexual)
Akukona lokho, inkinga ukuthi uma nginentombi ngiyazi ukuthi ngizoyilimaza
Futhi ngingazitholaphi izihogo zabafana ebholeni ... woza, ngaphandle kokuthi ungidlulisele kimi, uma kwenzeka abafana behamba ... LOL !!!
Pf, angifuni ukuba ngummeli kasathane, kodwa kwenza mehluko muni uma bekopisha? Ngabe izoyeka ukusebenza ku-Linux? Kulungile lokho. Ngaphezu kwalokho, uma befuna bangayikopisha njengoba kunjalo (ngokuhlonipha ilayisense, kunjalo), lowo umusa wesoftware yamahhala. Wozani, masingahlekisi, zonke izinhlelo zikopisha kuwo wonke umuntu, futhi angicabangi ukuthi kukhona okungahambi kahle ngakho, uma umbono muhle, ulungile kuzo zonke izinhlelo ezisebenzayo.
Akunandaba ukuthi bayakopisha yini, kufanele ube nokuvela okuncane, kungaba yiWindows, Linux, Mac noma i-BSD
Ngabe sikhuluma ngezokuqala? Uyangitshela ukuthi ku-Ubuntu, imenyu ephezulu "ayikopiswanga" ku-OSX? Noma ukuthi ibha engakwesokunxele ayifani naleyo eku-Windows 7? Woza manje, ungangenzi ngihlangane namatshe okugaya. Ngiyaziphinda, ngabe othile angangitshela ukuthi kungani uma sinombono omuhle kufanele kube kuphela ohlelweni olusebenzayo?
Uyangitshela ukuthi ku-Ubuntu, imenyu ephezulu "ayikopiswanga" ku-OSX?
Ukhuluma nomuntu omncane kakhulu emhlabeni.
Musa ukukopisha omunye komunye, noma kunjalo khuthazeka
Kungakho ngifaka amakhophi kuzilinganiso. 😉
Ngicabanga ukuthi okushiwo nguzakwethu akulona iqiniso elilula abalikopishayo, kodwa ukuthi manje bakukhombisa njengento "evukelayo" ...
Sawubona futhi wamukelekile 🙂
Ngiyakuqonda, ngiyazi ukuthi njengoba i-SWL ikhona, bangathatha imibono / ikhodi, bayisebenzise ku-OS yabo bayithengise ... noma balinde, abakwazi O_O.
Njengoba ingaphansi kwe-GPL, bangathatha ikhodi, bayisebenzise, ​​kepha bangayisabalalisi ngendlela ephathelene nabanikazi bayo futhi bathole imali ngayo.
Ngiyakhumbula ukuthi i-Apple imangalele kakhulu i-Samsung ngalo mzuzwana ukuthi ikopishe ukwakheka kwe-Apple kuma-iPhones abo, leli yicala elifanayo.
Inkinga ayikho esenzweni, kepha kunemiphumela. Ukuthi kamuva ukungazi nokungazi kwabaningi kuzobenza badumise iWindows8 njengento engeyona, bethi iMicrosoft yasungula iPause / Renew kumakhophi, i-LiveUSB (njengoba i-HP isishilo) nokuningi. Yilokhu okungihluphayo.
Ukubingelela futhi empeleni, wamukelekile kusayithi 😀
Ngiyethemba awuzizwa kabi ngempendulo 😉
Ngokusho kwakho, okulandelayo kuza iBallmer kanye namalungelo obunikazi iwindi lamakhophi amaningana nokubukwa kuqala kwefayela okuphindiwe, ngoba lokho "kungukuqamba" kwabo, i-LOL ...
Abakwazi ukukopisha yikhodi, kepha umqondo njengoba ungenalo ilungelo lobunikazi, bangayikopisha kalula.
Ngakho-ke isimilo sithi: "Yenza konke ilungelo lobunikazi, konke konke, noma ngabe kuyinkunzi ... kepha i-paténtalo, njengendlela yokuphepha / yokuvikela" ????
Awulona ilungu, kufanele ube nesithunzi, ukuqala, ukuhlonipha, ube nguchwepheshe ... ulahlekile, kufanele uhloniphe imisebenzi yabanye ¬_¬
Usho lokho ngoba awunalo ithuba lokuwina izigidi zama-euro xD. Okokuqala sikhala ngokuthi bayayivala ikhodi, bese sivula ikhodi bese sikhala ngokuthi bakopisha imibono yethu i-LOL.
Sibi kakhulu kunabesifazane abanezinkinga zabo.
Kimi bangakwazi ukwenza ilungelo lobunikazi ngalokho abakufunayo, uma ngabe seluqalile ukusetshenziswa ngaphambilini ngaphansi kwe-GPL abakwazi ukusiphuca lona. Eqinisweni ngimelene nohlobo olulodwa lobunikazi, "amalungelo obunikazi emibono" Usifaka kanjani esihogweni into engaphatheki futhi engabonakali?
Yebo, kakhulu eYurophu awukwazi isoftware yelungelo lobunikazi, nakhu sesithuthuke kakhulu, manje ...
Kungaba mnandi uma i-KDE neGnome bethola imali encane kusuka kukhophi ngayinye ye-MS WOS 8 njengoba bethola kusuka kubakhiqizi be-Android ukugwema icala elibizayo yize uBarnes noNoble bezonciphisa lelo cala lokuthola amapeni.
Mayelana nohlelo lwamafayela, ukuboleka imibono evela ku-BTRFS naku-ZFS kungakubiza kakhulu kunokusebenzisa i-FAT ku-Android, engikuthola njenge-idiosyncratic, osukwini lwakhe uTom Tom eseshintshele ku-ext2 noma ku-ext4 angikhumbuli kahle, ngenxa yesidingo se- I-MS.
Ngikunika ingxenye yesizathu mngani, inkinga ukuthi abayihloniphanga ilayisense, ngingajabula ukuthi ngesikhathi kwethulwa umkhiqizo bafaka isigaba esinikeza udumo ngemibono abayibolekile ¬ ¬.
Inkinga akukhona ukuthi bayakopisha, ngoba esicini esithile kuyanconywa, inkinga ukuthi bathula ngeqiniso lokuthi bakopishile nokuthi kubani, ngicabanga ukuthi kwanele ¬ ¬ !!!
Kuhle ukuthi bakopishe kepha bathola ubugebengu ngokungadedeli ikhodi ngokuya ngamalayisense we-GPL okuphoqa ukuthi ushintshe noma ukopishe okuthile, unesibopho sokukhipha ikhodi futhi siyazi ukuthi amawindi angathanda ukwenza lelo lungelo ( ukubhuqa).
Ilungele iMicrosoft kanye "nemibono yayo emisha".
Ukumakwa kwe-Qt ne-KDE ubuchwepheshe obusha kakhulu, bengisebenzisa i-distro ne-KDE izinyanga eziyi-6 futhi lapho ngisebenzisa i-W7 ngizizwa ngilinganiselwe kakhulu.
hahaha lawa ma-microsophyte angamakhophi, ngesizathu sokuthi iSandy kufanele ibe ne-bravo .. kepha ungakhathazeki madoda, i-linux ibe ngeyokuqala ukuba nayo .. kufana ne-Apple nesikrini sayo sokuthinta esinama-recelenometers asabela ekusimeni komunwe, lokho manje yonke into umhlaba uyikopisha, kufanele uhlangane nengoma esifubeni, kepha manje uza nombuzo ... ukusetshenziswa kwe-fucking W8 kuzoba malini?
Cha, onesihlabathi akakasithengeli lesi sipho engimaziyo, yingakho ubhale le ndatshana
hahahahaha Sengivele ngiyasiqonda isizathu sendatshana jhehej BAZINGA !!
Nginekhompyutha eyodwa kuphela (i-laptop) futhi uhlelo lwami lokusebenza kuphela yi-Debian ene-KDE.
Futhi ngakhipha wonke amalebula weWindows, kufaka phakathi ilayisense le-OEM. Futhi iqiniso, kwaba yinjabulo.
Okuwukuphela kwezindaba ezingangithakazelisa ngeWindows, kungaba ukwehla kwalo kuvuna amasistimu wamahhala.
Nginentshisekelo ezintweni ezintathu ngohlelo olusebenzayo. Ilayisensi yakho, yenze iphephe, nesivinini sakho. Njengoba uzobona, iWindows inginikeza kuphela ngejubane elikhulu, okungukuthi, ezintathu, eyodwa. Akwanele kimi.
Angikayisusanga eyodwa ezansi kweWindows ... kuyangikhumbuza njalo lapho ngiyibona, ukuthi MANJE ngisebenzisa kangcono ilaptop kunakuqala, ukuthi ngiyayisebenzisa futhi ngisebenza kangcono kakhulu kune ukuthi yakhelwe (njengoba bekucatshangwa / yakhelwe iWindows hehe). 🙂
Ngendlela, ngikhohliwe ukuyisho 😀
Isithombe sokuqala, kanye namaphephadonga amaningi engiwathathe ku-Artescritorio.com: http://artescritorio.com/tag/windows-8
Ngingathanda ukuzama ukuzama ukubona ukuthi isebenza kanjani. Uma igcina amaphutha wokuwina 7 noma okungcono noma kumane kungukushintshwa kwekhava ye-albhamu.
Ngizoyizama futhi, sengivele ngazama ukubukwa kuqala konjiniyela, futhi kwangimangaza ukuqala, futhi ngifuna ukubona inguqulo yokugcina njengoba ibukeka.
Yebo, inqobo nje uma bekopisha izinto ezinhle nge-linux, bese kungcono, uma kuhamba kahle ngizosuka kumawindi 7 kuye ku-8, kungenjalo sizobona.
Misa impilo eyinkimbinkimbi, zombili izinhlangothi ziyazi ukuthi lawa ma-OS (i-linux ne-win) enzelwe abasebenzisi abahlukile, abantu abafuna izinto ezihlukile.
ngokwesibonelo, ngithanda ukudlala kodwa futhi ngithanda ukukhiqiza, ngakho-ke ngizithola ngisenkingeni yokuthi wonke umuntu olapha uyazi… ngenzani? Ngiya kwiLinux ngiyasebenza ngihlele noma ngihlale ne win and play (kepha ngiyasebenza futhi ngiyahlela yize kungelula ukukwenza kune-linux)….
Yileyo inkinga abangane ...
Njengoba ngidlale i-Xbox360, i-Wii ne-PlayStation 3 ngosuku olufanayo, benginesiqiniseko sokuthi amakhompiyutha awawona awokudlala i-haha, yilokho induduzo yemidlalo yevidiyo eyenzelwe 😀
Inkinga ukuthi anginayo ... LOL !!
@ KZKG ^ Gaara, akufani yini ukudlala i-Battlefield 3 graphic ephelele kusikrini esingu-23 with ngegundane nekhibhodi kunokusebenzisa induku yokudlala elula.
Angikayidlali leyo, ngicabanga ukuthi konke kunobuhle nobubi bayo 🙂
ku-mw3 yebo nangaphezulu ukuthi abantu abaningi bayayidlala kuyajabulisa kakhulu.
Imidlalo ye-Console iyabiza kakhulu, ibiza kakhulu. Ngaphandle kwalokho kunemidlalo eminingi engeyona eyeziduduzi, ezinjengezinhliziyo ezigqwalile ne-mmoprg, futhi ekugcineni ukudlala ku-steam kuyigugu xd.
Imidlalo ye-Console iyabiza kakhulu, ibiza kakhulu.
Hleka i-PS3 bese ubona ukuthi akudingeki ukuthi ukhokhe i- € 60 noma i- € 70 ngomdlalo ngamunye
Lokho kulingana nokuthi, thenga i-ps3 € 249, wazi ukuthi ungagqekeza kanjani noma, uma wehluleka lokho, cela umuntu onenye i-ps3 akwenzele yona, bese umkhokhela imali ethile, kahle, into engingayenza kwi-pc yami, ngaphandle kokuthi chitha noma i-euro ngaphezulu, usho ukukwenza kukhonsoli ekhokha cishe ama- € 250. I-XD enentshisekelo, ethakazelisa kakhulu. Ahh futhi ekugcineni ikhonsoli nayo iyi-LOL ekhethekile.
Kepha ama-hacks awabizi kakhulu. Bengingenayo i-PS3 kepha eminyakeni eyedlule eyayisuka kuPS2 iya kub baka baka bakaleta bakazala wami yambiza ama-euro angama-30 noma kunjalo (angitholanga ukuyigenca), ngaleyo ntengo ikufanele
Khokha omunye umuntu ukuze athuthukise i-Playstation yakho lapho ungazenzela wena? Angiboni kunesidingo sokukhokha u- € 30 kwisisebenzi esisemsebenzini.
Akuwona wonke umuntu owazi ukuthi angalugenca kanjani
Yebo, uyafunda, ngabe uzalwe wazi ukuthi ungayifaka kanjani i-OS?
Ngabe labo bantu bokugenca banika isichitho, i-OS ayifani, ngoba ngalokho ngeke uhlaziye ikhompyutha
Akunakwenzeka. Ama-Consoles awasoze aqhathanisa ne-PC maqondana nobunzima bemidlalo namandla. Ake sibheke ukuthi ungayidlala i-LOMAC kukhonsoli, mhlawumbe kuphela uma usebenzisa i-radar uzophelelwa izinkinobho kusilawuli!
Futhi angikudingi, ukuthi ngisho nami sengivele ngizibona ngiyihlaya lokudlala lezo zinto.
WOZA! Ukuthi ngineminyaka engama-23 futhi ngiqhubeka ngithenga imidlalo yePokemon: / Sengivele ngiyithengile i-3DS njengoba ubonile ukuthi kwesinye isikhathi ngiphawula naye. Iminyaka ayinandaba, uma ikujabulisa, qhubeka, ngihlale ngibona imidlalo njengokubalekela iqiniso, ikhefu lengqondo, noma ngicabanga nje izinto xD engizibona ngokuzayo, njengama-80s, ngisadlala ngamakhonsoli lol
HAHAHAHA uyazibona izinto azishoyo ... uma kuzombulala HAHAHAHAHA.
Yingakho izikhathi eziningi ngicabanga ukuthi uyahlanya, angikuphenduli kulokho akushoyo, ngoba angihlali ngidlala ne-haha njalo.
WOZA! Ukuthi ngineminyaka engama-23 futhi ngilokhu ngithenga imidlalo yePokemon
Kuze kube ngiyeka imidlalo yevidiyo (uma ngingaphazami lapho ngineminyaka engu-15) bengidlala imidlalo yePokémon, bengifuna ukuba neqembu likadrako nengxenye yeqhwa lonke ezingeni le-100, futhi ngilitholile.
Bengihlala ngibona imidlalo njengokubalekela iqiniso
Hhayi-ke manje sengibabona njengenkulisa yezingane ezisencane, ngayeka ukudlala ngoba iPlay Station ayingithathanga umdlalo ngathukuthela, futhi ngoba ngemuva kwalokho imidlalo imunca ubuchopho bami futhi angizihlanganisi.
Leyo yinto ebonakala kimi ukuthi eyabantwana abafinyelela eminyakeni eyi-12 noma kwenye indawo, ngicabanga ukuthi sibadala kakhulu ukuthi singadlala imidlalo emincane, bobabili uSandy, wena nami.
Ngakho angikutsheli iminyaka yami.
Ngiyazi futhi ukuthi uyi-carcamal
Futhi ungaphansi kweminyaka yobudala 😛.
okokududuza kwemidlalo ... ngakho konke okunye i-Gnu / Linux
UGeorge Ferreyra kusho
Ngiyavuma ukuthi i-MSFT ibilokhu ithathe imibono kwezinye izinhlelo ezisebenzayo, hhayi i-Linux kuphela, kepha ne-OSX.
Eminye imibono, uzuze kangcono, eminye ayitholakali. Ngaphezu kwalokho, lokhu kufakazela ukuthi, ngokungafanele, imibono igcina iba ngeyalabo obenza babe sesidlangalaleni hhayi labo abanayo.
Ekugcineni, engingavumelani nakho ukusho ekugcineni kokuthunyelwe ukuthi i-MSFT ayizange isungule. IMetro UI iya phambili futhi angicabangi ukuthi ungasho ukuthi yebiwe kwenye indawo.
Uma othile efuna ukungihlukumeza ngokuvikela i-MSFT, angakwenza ngqo ku-twitter (@ 42pe), kepha kubonakala kimi ukuthi amaphuzu engiwenzile avumelekile impela.
Phendula u-Diego Ferreyra
Okuthunyelwe okuthakazelisayo. Into ehlekisayo ngabaphawuli abaningi abaganga ngoM M $ ukuthi basebenzisa i-OS ye-Microsoft ngisho ne-IE ukuphawula ngale bhulogi.
Kanye negama layo, kunezimpawu ze-OS nesiphequluli. Futhi bakhuluma ngokuzenzisa, haha.
Phendula uJuan Perez
Kwenzeka ukuthi abaningi balabo abaphawula lapha bakwenze lokho emsebenzini wabo, futhi zimbalwa izinkampani ezivumela ukusebenzisa i-OS efunwa isisebenzi, yingakho ubona uphawu lweWindows Windows
Impela, ngoba i-linux iyamunya. bamba amawindi
Angazi, yindaba endala efanayo, iWindows ikopisha ubuchwepheshe obuthile noma isici esivela kwenye i-OS bese iyethula njengendlela entsha yokusebenzisa i-PC yakho! bese unelungelo lobunikazi lokuchofoza kabili. Kuyacasula ukuthi kunjalo, kepha futhi akuthathi ukulala kwami, uma ngithenga iPc entsha elethe i-W8 ngokuzenzakalela, into yokuqala engizoyenza kungaba ukufometha nokufaka i-Linux.
Angazi ukuthi yini engenza ngizisole kakhulu, uma kufanele iqiniso lokuthi iMicrosoft "ikopisha" i-Linux (ukuthi ngikwazi ukubeka izinto eziningana ezikopishwe kusuka ku-Linux) noma uchungechunge lwabalandeli ezimpendulweni, ngokumangalisayo, kufanele ifundwe.
Ungasitshela ukuthi kungani "iqiniso elifanele" 😀
Luis, ngiyawuhlonipha umbono wakho kepha ungangibizi ngokuthi ngishiseka ngokweqile. Ngingomunye nje wabasebenzisi abazame zombili i-Operating Systems futhi ngaphandle kokuphuphuthekiswa ngothando, ngiyazi ukubona izinto ezinhle nezimbi kulowo nalowo.
Kwaziqondanela nje ukuthi umngani ubekhona emizuzwini embalwa edlule ngenkathi ehlola iPrecise Pangolin Alpha2 kwi-LiveCD. Ngibambe iwindi, ngalinamathisela onqenqemeni bese ngithola umphumela weCompiz Grid, lapho ifinyelela onqenqemeni lwewindi. Isibabazo sakhe sasithi: Miraaa njengakwiWindows Seven, Ubuntu wayikopisha. ¬¬
Yilokho okushiwo yi-KZKG ^ uGaara, lowo mphumela wawusivele ukhona ku-KDE ngokwesibonelo, ngaphambi kokuthi iWindows iwusebenzise, ​​kepha njengoba iWindows inayo manje, abasebenzisi bayo bacabanga ukuthi bekuwumbono wabo kanti empeleni akuyona.
Vele, iWindows yamukele izinto kwaLinux, baphikelela ukuyibiza ngokuthi "ukukopisha" kepha ababoni ukuthi iLinux nayo "ikopishe" izinto. Ibha yomsebenzi yavela kuWindows 95 futhi kamuva yavela ku-gNome, amafayili evulekile windows, ngokubuka kuqala kwezithonjana akuzange kusungulwe ku-Linux noma, noma i-interface yakamuva ye-Ubuntu, enebha yesithonjana ngakwesobunxele, efana kakhulu naleyo Mac bar, ngakho-ke ngingabhala ezinye izinto ezamukelwe ku-Linux futhi ngithuthukise ulwazi lomsebenzisi.
Ngiyakuqonda ukuthi abaningi bakhathazekile ngokuthi abantu bacabanga ukuthi kusetshenzisiwe, kepha into ebalulekile ukuthi noma ngabe lezo zinto zisetshenzisiwe, i-interface ye-OS ngayinye iyasiza kumsebenzisi.
noma isikhombimsebenzisi se-Ubuntu sakamuva, esinomugqa wesithonjana ngakwesobunxele, sifana kakhulu nebha ye-Mac
Ubuntu, noma uWinbuntu njengoba ngikubiza kanjalo kuyicala elihlukile, labo bayakopisha, futhi futhi ngokusobala
U-Arturo Delgado kusho
Hahaha… Kahle okwakhe =)
Phendula u-Arturo Delgado
Angazi, kuhlala kufana ... kepha yini engingakutshela yona…. noma abanye bayiziphukuphuku kakhulu futhi abaguquki futhi abakwenzayo kungama-bunnies amawindi ... ngoba amawindi asithumela amaphakheji wesitayela sabo sokuwina futhi kumnandi impela kunezinhlobo ezisungulwe abanye futhi okungamawindi .. okunye okusebenzayo amasistimu angafinyeleli emphakathini awusoze waba yilutho ... ngoba sizokhetha ukwenza izinto ezihlukahlukene nemodeli ye-Windows unomphela ... kahle iphesenti elikhulu elisebenzisa futhi elizosebenzisa windows ... umuntu kufanele enze uhlelo olusha futhi oluhlakaniphile lokusebenza iyaziguqula futhi ivumelana nezimo zehadiwe (sengivele ngibona i-hahaha) kepha lokho kuzoba ngcono kunakho konke okukhona manje
Yebo kunjalo… Ngitshele ukuthi iLinux ingafinyelela kanjani kubasebenzisi abaningi lapho ama-95% emakethe egxile kuMicrosoft noma eMachintosh? ILinux ikhahlela ukuziqhenya kwalezi zinkampani ezimbili njengeseva, kepha ayikwazanga ukulwa nokuzimela kwalezi zinkampani ezimbili, nokuningi kweMicrosoft ngenxa yezivumelwano enazo nabakhiqizi be-PC abasekhona namanje ama-boot-licks amaningi , kude nezinhlelo ezivaliwe ezisebenza kuphela kusistimu eyodwa, noma ngabe yiMac noma iWindows.
UGates kwinhlolokhono ezinsukwini zakhe zokuqala ngeWindows wamemezela ukuthi "Sikopisha lokho esikubona kukuhle", yebo, wakuvuma ngaleso sikhathi okungenani ngoba abasebenzisi abaningi beMac ngaleso sikhathi (ngikhuluma eminyakeni engaphezu kwengu-20 eyedlule uma ngikhona (Baphazanyiswa) Bakuqaphelile ukufana okungafani nenye, kepha ukuthi bayaqhubeka nokwenza okufanayo kuleli phuzu lempilo njengoba ingasasebenzi, akusikho ukuthi basebenzisa iLinux noma iMac njengezingulube ze-Guinea, sebevele baba ngamavila ukusungula, futhi ngokude.
"I-Windows Copy ku-Linux"
Manje iMicrosoft izokuvumela ukuthi ugcine idatha yakho ku-SkyDrive. Ngama-25GB esewonke ongawasebenzisa, lapho ungagcina hhayi umculo nezithombe kuphela, kepha imininingwane nge-akhawunti yakho yomsebenzisi nokuningi.
Woza, lobo bukhona / umqondo we-Ubuntu One
Yini yona le ebivele ikhona eMandriva, nayo ebe iseMac kusukela ngesikhathi sikaMaria Castaña.
Bengingazi ukuthi ukuhlanganiswa okunjalo kukhona eMandriva 🙂
Siyabonga ngethiphu 😀
Kepha kufanele kuthiwe kungukuqanjwa kweCanoni $ oft, akunjalo? ¬¬
Futhi-ke, ngiyaqonda ukuthi awumthandi kakhulu uMandriva
Angithandi uMandriva noma uMageia omuhle noma omubi 🙂
Ngakho-ke kufanele ngabe ngikuchazile ngokwenzeke lapha futhi:
Njengenjwayelo uBill Gay ukopisha i-GNU / Linux!
Uma ubhekisa kuBill Gates ngo "Bill Gay" usephutheni elikhulu, uBill Gates akasekho kwaMicrosoft, unamasheya kodwa akasenaso isikhundla abesiphethe.
Kepha wakopisha emuva emini, angithi? UBill Gay ukopishe kwaze kwaba sekugcineni
Akukhathalekile ukuthi iBallmer manje
Njengoba omunye umuntu asho, kwakungakaze kube kubi ukukhononda ngamaphutha we-linux kuze kufike ukufika kuka-Ubuntu nehlelo lawo lamahlanya angamaTaliban angenangqondo, aguqulela i-linux inkolo yamanga futhi ephindaphinda, unyaka nonyaka, njengopholi, izimfundiso ezifanayo zokholo , iziqubulo nama-decalogalog, ngaphandle kokuzihlupha ngokuhlola imininingwane.
Inkinga nge-linux ukuthi iseyisidala, futhi inzima kakhulu kumsebenzisi wasekhaya. Sonke sihlangabezane nesipiliyoni sokufaka i-linux yelungu lomndeni noma umngani ukuze, ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, beze bezokucela ukuthi uyiguqulele iWindows.
Futhi-ke kunenkinga yesoftware yamahhala engasebenzi futhi engenzi kahle. Noma izindaba zokuphepha okungekho muntu ofuna ukukhuluma ngazo ( http://www.ubuntu.com/usn ). Vele, i-linux Taliban inezimpendulo ezichazwe ngaphambilini kukho konke lokhu. Bengilokhu ngifunda futhi ngizwa izaba ezifanayo "ezijwayelekile" iminyaka neminyaka,
Kepha ekugcineni iqiniso linenkani futhi ligcina liziphoqelele, lishiya wonke umuntu endaweni yakhe. Futhi isiza se-linux asifinyeleli isabelo esingu-1% samakhompyutha asekhaya:
(Futhi cha, akungenxa yokuthi iWindows ifika ifakiwe kumakhompyutha amaningi athengiswayo. Noma ingabe siyalikhumbula icala likaDell no-Ubuntu, nezinsongo ze-Ubuntu Taliban ezibhekiswe kuDell uma iyeka ukuthengisa amakhompyutha we-Ubuntu?)
Jo. Bengizodla isidlo sakusihlwa, kodwa ngokubona ukuphawula kwakho ngizokuphendula.
Bengilokhu kusukela ngo-2005 noma ngo-2006 ngingenawo amawindi. Kuphela nge-linux futhi ngijabule kakhulu. Ukuqala nge-SUSE manje ngine-Ubuntu. Anginankinga nokukhokha lokho okubizayo, kepha uma umkhiqizo usezingeni elifanele. Endabeni kaM $ akunjalo. Ngiyaxolisa kodwa yikaka. Ngikunikeza isixhumanisi mayelana ne-linux. http://quepagina.es/blog/linux/ Yibuke ngokucophelela ukuze ungakhulumi umbhedo kusukela manje.
Uma ufuna ukuxoxa kancane mayelana ne-lin vs win, wamukelekile njalo.
Ukuphawula kwakho kulayishwe ngokweqile, kucishe kufane nokwalahlwa yi "Taliban". Lezi zinhlobo zabantu azigcini ku-Ubuntu kuphela, kukhona kwamanye ama-distros amaningi, emawindini nasemhlabeni wonke lapho abantu beqoqwe khona.
Ngempela, kunezinkinga ku-GNU / Linux, kepha iphuzu lakho maqondana nokuvikeleka kwesoftware yamahhala alilungile.Ubeka isixhumanisi lapho kushicilelwa khona ubuthakathaka bobuntu, »okungekho muntu ofuna ukukhuluma ngakho»… awucabangi ukuthi kungaba eshicilelwe ngokunembile ukukhuluma ngabo?
Ukwenza izinkinga emphakathini kube ngenye yezinto ezinhle kakhulu zesoftware yamahhala, ngakho-ke izixazululo zingasetshenziswa ngokushesha.
Okuhlale kubulala i-linux ukuthi benza izinhlelo zokusebenza nezindawo zokuhlangana, kepha ngokwethembeka bakwenza kubi kakhulu, yingakho iMicrosoft iphumelela, ngoba ibenza bafane kodwa BABHAMBELE futhi leyo mininingwane emincane ibaluleke kakhulu ...
UGabriel Rivero kusho
Hmm kahle, uma ngifuna indawo "enhle", ngifaka i-kde, uma ngiyifuna isebenziseke, i-gnome3, uma ngiyidinga ngokushesha, i-lxde, into enjalo angisoze ngayenza ngewindows $
ngokusobala ngokwesilinganiso izindawo ziningi "zimbi" kepha kwezicelo ezisuselwa ku-qt indaba yehlukile
Phendula uGabriel Rivero
Uyemukelwa uGabriel Rivero. Ngempela, lezo zinhlobonhlobo zezinketho iWindows ayinayo, ngakho-ke +1
Kunoma ikuphi, ukubonakala kweWindows yinhle kuneLinux, ngakolunye uhlangothi iLinux ekopishe ngokuphelele iMac App Store, icishe ifane, iphuzu elibi leLinux.
Lokhu ... okokuqala ukwamukela. Kungumqondo wakho futhi ngiyawuhlonipha, kepha kwenzeka kanjani ukuthi iLinux ikopishe iMac App Store? Ukhuluma ngani ngqo?
Ngiyabingelela, ngiqonde ukuthi i-Ubuntu Store ibukeka kakhulu njenge-Mac App Store, ukuthi ihlelwe kanjani, ukuthi igqamisa kanjani izinhlelo zokusebenza ezifakiwe, njll. ukufana kuyamangaza.
Kungenzeka kube njalo, iqiniso ukuthi angisebenzisi Ubuntu, angazi, kodwa ukuthi i-1 distro ikopisha isikhungo se-software, akufani nokuthi iLinux ilikopisile, iqiniso lokuthi Ubuntu lungcono kancane Ukwaziwa akusho ukuthi kumelela iLinux njenge-OS noma ukuthi okunye ukwabiwa kwenza izinto ngendlela efanayo.
Bheka i-Ubuntu, i-Debian, i-Xubuntu, i-Asturix, okuyiyona engigcine ukuyivivinya, inesikhungo esifanayo sesoftware esikopishwe kwa-Apple, kodwa angisho ukuthi akulungile, ukuthi nje lokhu okuthunyelwe kulahla ukuthi iWindows ikopisha izinto eziningi zeLinux, kepha I-Linux ayikhululwanga kukhophi.
Apple Iphinde yakopisha kusuka kwamanye ama-Operating Systems noma ama-interface. Ababona abangcwele kule ndaba futhi kuyinto ejwayelekile, futhi kungaqondakala nokuthi umkhiqizo owodwa ukopisha omunye uma uwenzela ukuthuthuka. Eqinisweni, ngibonile izindatshana eziningana eziqhathanisa izindaba zakamuva ze-Apple nezinto ebesinazo ku-GNU / Linux isikhathi eside. Vele uthathe uhambo lapha.
Daslive, ngiyaxolisa, kepha isondo alikwazi ukuphinda livuselelwe, kufana nokuthi iMercedes ikopishe i-Audi, ngabe ikhona enye indlela yokwenza izimoto? Sibenza babe yindilinga noma yini i-XD?
Ah, lapho-ke kungaba okulungile ukusho ukuthi Ubuntu ukopishe iMac ... kepha ukuthi uLinux nguyena oyikopisile, akunjalo, kubanzi kakhulu, awucabangi? 🙂
Ngempela, ngoba i-distro ekopishayo yi-Winbuntu, ezinye azikho
Uma iWindows i-BAD ... njengoba abasebenzisi be-linux bebehlala njalo bephikisana ... nokuthi iLinux iyisakhiwo esihle kakhulu futhi into ephelele kunazo zonke eyake yakha ... ngoba ayinaso isabelo semakethe esingu-1%? ??? ??? Ngihlale nginokungabaza njalo
Buyekeza izibalo zakho. Imali ngu-9-10%.
Ngenxa yezindawo zokumaketha neze-OEM phakathi kwezinye izinto, awucabangi yini baby?
Kufanele ufunde ukuthi nezinsiza ze-linux azikho mahhala uma ungazi, iningi le-Gnu / linux distros linekhodi yokuphathelene, ake sithi ama-97% we-distros, ngamafuphi, ancike kwisoftware ephathelene, luphi uhlelo lwamahhala okhuluma ngakho Ungitshela ukuthi ungakha uhlelo lwakho ngendlela othanda ngayo kepha uma ufuna ukukwenza kufanele uqale kusuka ekuqaleni kusuka ku-kernel futhi ngifuna ukwazi ukuthi ngubani lapha owaziyo ukuhlela i-linux kernel ??? Kulula ukusho ukuthi uma ucabanga ukuthi usebenzisa isoftware yamahhala kungamanga nje, sebenzisa isoftware yangempela yamahhala futhi uzobona ukuthi kusho ukuthini ukuba ne-OS yamahhala. ukuba ne-OS yamahhala kubandakanya ukulungisa nokulungisa amaphutha. Kepha uyazi ukuthi ngomlingo ama-distros anokuncane kepha ngokusebenzisa isoftware yokuphathelene abakholelwa ukuthi banesoftware yamahhala ngoba banomthombo ovulekile kuphela.
Mr hyde kusho
Kungani unentshiseko engaka? ... kepha ngabe uwubonile umbhedo abawenzile ngale OS? ...
Manje ngizoqhubeka ngichaze ukuthi ngilunge kangakanani usosayensi wekhompyutha (lapha ngiphonsa ama-globs kimi) ukuthi kungani lolu hlelo lokusebenza ...
IMICROSOFT ISITHOLILE AMANANI AMATHEBULA ANGADAYISIWE NGENXA YOKUPHAKATHI KANYE NOKUTHENGISWA OKUPHANSI KUQHATHANISWA NE-APPLE ...
Into yamafu we-25 gig ... NGABE KUKHONA UMUNTU EKwahlulelweni KWEZEMPILO YABO ANAMAFAYILI NOMA IZINTO ZANGASESE EZILAYISHWE KU-INTERNET CLOUD? Kepha uma lokho kungukuvula iminyango kumasela olwazi ku-nethi! Kulabo abangazi, ifu yindawo ebonakalayo lapho ungafaka khona "izinto" zakho, ezisengozini ngokuphelele futhi ezifinyeleleka ngokukhululekile kuwo wonke umuntu (ngokungathí sina ngiyakwenza angazi ukuthi ngubani owayengunkanyiso owasungula lokhu).
Into ngokushintsha izinombolo zokudluliswa kwamadokhumenti ... ISIwula ESIKHULU SEKHULU LOKUPHAKATHI !, Kuyafana noma ngabe ubeka ibha eluhlaza kimi, eluhlaza okwesibhakabhaka, noma eyodwa enebhithi enemibala ephuma noma eyodwa enephesenti elilodwa. .. Umphumela uyefana, kuya ngeRam Memory onayo, ungadlulisa amadokhumenti amaningi ngokushesha kunokuba unakho okuncane.
Futhi kuthiwani ngezithombe… konke kuhlakazekile kwi-hard drive, uma ngabe konke kuhlelwe ngamafolda namagama asikho isizathu sokubeka lokhu kusile.
FUTHI UKUYIGCWALISE ... I-NTFS IKUTSHINTSHELE OKUNYE "IMICROSOFT INVENTION", bakwenze lokhu nje ukuze abasebenzisi be-Ubuntu bangakwazi ukudala ukwahlukana kwabo ku-apula ngendlela abathanda ngayo ...
NGISHO, OLUNYE UBHEDI OLUKHULU OLUSUKA EMICROSOFT
Phendula uMnu hyde
Angazi ukuthi kungani bephikisana kangaka uma uhlelo oluzinzile kakhulu okwamanje yi-OSX Mountain Lion, luqinile, ngaphandle kwamaphutha, ngohlelo olulodwa lokulondoloza futhi lunezinkinga ezimbalwa kakhulu zokuphepha, iLinux iya ngokuya iba mandala kuzinzo namaphutha, IWindows 7 ngithuthuka kakhulu, kepha i-OSX uma ufuna ukusebenza kwe-premium iyona ndlela enhle kakhulu, jabulela lolu Lwesine.
Yebo, kubonakala kimi ukuthi usebenzise izinguqulo ze-Linux zika-1999 noma ngaphambili, futhi amawindi uwasebenzisele ukudlala kuphela.
Thola kahle nansi i-novice kanye nomsebenzisi ojwayelekile kusukela ngeLinux Mint 13 ene-KDE ebonakala kimi ibukeka ingcono kunewindows 7, yize bengingeke ngimangale uma i-8 ibukeka njenge-KDE.
Ungathola kanjani, ufunde bese siyaxoxa.
I-Linux iyi-kernel, futhi uma uthi i-linux ayizinzile, kungenxa yokuthi usebenzise / ubone inguqulo ye-kernel esahlolwa. Iqiniso?
Ungayiqondi kabi impendulo yami, ngichaza nje ukuthi kunokwabiwa okuningi okusebenzisa i-Linux kernel, kanye namathuluzi wamahhala nenye into ephathelene nokwenza izinhlelo zabo zokusebenza (Izabelo) ezingabizwa ngokuthi: Ubuntu, Mint, Fedora, Arch, I-OpenSuSe, ne-etcetera ende enezindlela nezinhloso ezahlukahlukene ezenza umsebenzi wazo ngaphansi kwehadiwe elifanele.
Ngalesi sizathu, akunakwenzeka ukusho ukuthi "i-Linux izinzile" noma "ayizinzile" kubhekiswe kokujwayelekile kwezinhlelo zokusebenza ze-GNU / Linux. Mina (ngokwesibonelo) ngisebenzisa iDebian Squeeze, futhi ngifisa ukwazi ukuthi iyiphi inguqulo yamanje ye-OSX noma iWindows ezinze kakhulu futhi evikelekile kunale.
U- @ YoSoyDario usevele wathi: «Kunabantu abaningi abayiziphukuphuku, abakopelayo nabangasizi ngalutho emhlabeni, ukuthi ngenkani kumele basebenzise uhlelo olusebenzayo olwenzelwe bona; wamukelekile ku-Windows »
Mepa ukuthi bakhohlwa ukukopisha ukuzinza nokuphepha, hehe
Hehehe uff into engingabazi ukuthi bayayikopisha.
@Yao Ming kusho
Ngingathanda ukubona i-GNU Linux ivuleka ngokushesha njenge-Windows 8, futhi ukuphepha kweLinux kungazinzile kangangoba akudingi igciwane, kuyazilimaza, enye into encane engazinzile kakhulu kuma-64bits ngakho kuphi ukuzinza kwakho ???
Phendula ku- @yaoming
Kusukela ekuqaleni, ijubane le-Windows 8 ukuqala kungenxa yokuthi iSistimu ayicimi, ivele iye ku-Hibernate .. ¬¬
Ngicabanga ukuthi unolwazi olungelona iqiniso, uma ngabe ubungazi, ukulala ubuthongo kwikhompyutha kuyishiya njengoba uyicisha, futhi lapho uvula ikhompyutha yakho, ukulala ubusika kuhamba kancane kakhulu engxenyeni ebekiwe yediski….
Okwenziwa yiWindows 8 ukuthi ihlela kabusha i-chip ebhodini kanye nomakhalekhukhwini bese iyayigxilisa ukuze iqale njengebhomu. Amabhodi ahambisana nalesi simiso avuleka ngokushesha kunamanye ... kweyami ngokwesibonelo ivula cishe kumasekhondi ayi-5 ... I-Hinbernarse yehluke kakhulu ekuqiniseni lolu hlelo olusha lwesimanjemanje olwenzelwe amaphilisi kanye ne-pc
Kungenzeka ukuthi nginolwazi olungelona iqiniso, ngisho lokho engikufunde ku-Intanethi kuphela ...
I-ha ha ha Linux engazinzile ukuthi uvela kuyiphi iplanethi ngokuphepha ngikuphonsela inselelo yokungena ohlelweni olususelwa ku-linux, uma ungakwazi, hhayi ngokuthile ukuphepha kwezwe lase-US kuzosebenzisa amasistimu asuselwa ku-linux kanye nama-virus zingaba khona futhi zenziwe kepha zivikelekile ku-linux. Mayelana nokulungiswa kwayo ngendlela engafanele futhi konakaliswe kukodwa ake ngikutshele ukuthi akuyona iWintendo ukwenza lokho. @yaoming Ngithemba ukuthi uhlala kamnandi emhlabeni wakho omuhle weWintendo futhi ugcwalise amaphakethe kaBill Gates.
Uma ngabe ubungazi ukuthi akukaze kube yimpilo yami futhi ngakhokhela isoftware futhi angisoze ngayikhokhela i-GNU / Linux uma ngabe ubungazi ukuthi ivikelekile kumagciwane ngesizathu esilula nesilula ngoba iyisikhali sabaduni nokuthi ngubani ongatheleleka ngesikhali sakhe…. ukudala ama-virus kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza kungaba iMac, iWindows noma i-GNU / Linux akuyona into ongabhala ngayo ekhaya ngoba konke kwenziwa ngolimi lohlelo, kukhona abaduni abaye bagenca amanethiwekhi okuphepha amakhulu kakhulu futhi basebenzisa i-GNU / Linux. Uma bekhuluma ngeLinux bakhuluma kuphela ngezokuphepha, bangitshele ngokunye noma ngabe iLinux isebenza kuphela lokho kuphepha ???
I-W8 iyabhema, kwenzelwa ukubuka izithombe ezingcolile nabasebenzisi bayo yilokho abakwenzayo. Amasistimu wangempela awenziwa yi-mocosoft
Ngithi noma ngabe kusetshenziswa luphi uhlelo, ngamunye ulusebenzisa ngoba bayaluthanda futhi luyasiza kulokho abakwenzayo, noma ngabe amawindi, i-linux (i-distros), ama-macos, akunandaba ukuthi umuntu ulusebenzisa kanjani futhi ngiyazi ukuthi ingasetshenziswa kanjani, ngithi akudingeki ibone lutho kuphela ukugxekwa kwabantu engicabanga ukuthi akudingeki bachithe isikhathi sabo kimi bobabili bahle impela omunye unezinzuzo ezingcono kunezinye kepha akekho osele ngemuva
Kungani ubona ilogo ye-Debian? Ngine-penguin engu-7 esitebeleni futhi kuphela
Ngiyabona ukuthi bakude, kuyilapho belwa ukuthi uma i-linux ukuthi uma amawindi ukuthi uma igobolondo likapholi, abanye balale kahle futhi benza i-teak, abanye bathengisa amalayisense, abanye bayasekela.
IMicrosoft inento eyodwa kuphela enhle, iwine i-premium wrestling futhi iyinkosi yezimakethe futhi iminyaka engaphezu kwengu-20 ibingumholi futhi akukho ukuzinza noma ama-linuxer amabi azokuguqula iminyaka eminingi, nawe wazi ukuthi kungani, ngoba lokhu kungenxa yemali nemali yinkosi ...
Le yinto, futhi eminyakeni engama-20 lapho iLinux ithandwa, ama-windowseros anamandla azovela ukuzama ukuguqula isitha. Isiliva lihambisa umhlaba futhi kunemali eningi lapha. I-Health Linux ne-Windows inhliziyo eyodwa….
I-Windows 8 i-crap, ikhophi efanayo kunoma iyiphi i-windows ene-patch kanye ne-metro ethandekayo,
Akusilo olunye uhlelo, wuhlelo noma uhlelo lokusebenza kanye ne-yamada metro.
Okufunayo ukuphoqa ithebhulethi ukuthi iso amafasitela 8 ayilutho ngaphandle kokumaketha ukuphoqelelwa nokuthi abantu bajwayele ukubukeka ukuze basheshe basethebhulethi. Yebo, lowo ngumbono wami.
Hhayi-ke ngafaka amawindi 8 nayo yonke leyo baina, into yokuqala ebengingayithandi yileyomibala esabekayo ngicabanga ukuthi amawindi awile ngoba okungenani ngemibala yiwo ayegqamile, angazi-ke ukuthi lokho kuphazamiseka okwakubizwa ngokuthi imitha kwakuyini, ngakho ukuchofoza okuningi ngenhloso eyodwa, manje kunonya kakhulu (ukusho okuncane)…. Ngithi uma isiphequluli sinezinkinobho eziningi sengathi i-pc yami ibinesikrini sokuthinta se-WTF !!!
Kulokhu engizokusho, amawindows 8 enzelwe ama-mobiles futhi lokhu uma kungahamba kahle ngoba lokho okukhonjiswe ngamawindows phone ngicabanga ukuthi bayehlela ezansi, okungawutakula kuma-pc kungaba ngamawindows 7 futhi uqaphele lokhu njengoba i-Gnu / linux Ineziphakamiso ezinhle zokukhula emaphesentini okusetshenziswa emhlabeni wonke, umzuzu unikeziwe futhi ngicabanga ukuthi akufanele simoshe njengaleso sikhathi lapho iWindows Vista yadumaza wonke umuntu (isakwenza namanje kodwa bambalwa abantu abathatha isinyathelo sokushintsha ).
Isipelingi esihle kanjani. shit funda ukubhala bese uphawula ukuthi kungani ngempela angikholwa ukuthi ushaya kanjalo
UKevin Perez kusho
Manje njengoba sekukhishwe iWindows 8, ngibonile ukuthi ezinye izinto eziwusizo zisusiwe kuyo, njengokudala amanethiwekhi we-Ad-hoc, ngicabanga ukuthi ngenxa yokusekela kwayo amaphilisi.
Bengilokhu ngibhekile isikhashana futhi ngiyabona ukuthi leso sithombe esingesihle seWindows 8 besicibilika ngenxa yokuqhunyiswa kwamabhomu okukhangiswa kweMicrosoft, kepha namanje baningi abangasithandi isixhumi esibonakalayo.
Ukuba ne-OS ngendlela esithanda ngayo namhlanje kubonakala kucishe kubaluleke njengokuthatha isinqumo sokuthi hlobo luni lwezingubo zokugqoka usuku lwe-gala. Ngokuzimisela, kufana nokuthi amakhompyutha ayimpilo yethu, kunamathuluzi asisizayo ezimpilweni zethu.
Uma kufanele ngihlanganyele, ngiseGNU / Linux. Ngokusobala injongo yakuqala yokwenza i-GNU ilahlekile, kepha i-FSF isasebenza. IMicrosoft ishiye isithombe sayo sebhizinisi ukuze ixoxe ngokwengeziwe nabathengi bayo, isuse ukugxila kwayo ehhovisi kanye nochwepheshe iye ekucabangeni kakhulu ngomthwebuli wezithombe nomthandi womculo.
Kodwa-ke ubheka lokho, lokho bekuyinto i-Apple ebigxile kuyo iminyaka. Indawo iMicrosoft ayinaki: umsebenzisi ojwayelekile. Ukushintsha kwayo ngokuphelele kumasu kukwenza kungagwemeki ukuhlangana nobuso obucasukile, ikakhulukazi uma kubonakala sengathi iMicrosoft ikholelwa ukuthi wonke ama-PC emhlabeni asebenzisa izikrini zokuthinta.
Yini i-GNU / Linux eyisidala? Kusuka kumuphi umbono? Imidwebo? Ukuphepha? Ukusebenziseka? Izinkampani ezinjengeMicrosoft neApple ziguqula ukubukeka kwazo futhi zivuselele izithombe zazo zomphakathi ukuheha abathengi abasha. Uma i-GNU / Linux ingakwenzi lokhu, ingabe lokho kuyenza ibe ngeyakudala? IMicrosoft ilingisa kanjani uhlelo lwakudala?
Ngisanda kufunda ukuthi ayikho i-software yobungcweti, kodwa abantu abangochwepheshe. Ubungcweti abulinganiswa nenani lemali elitshaliwe, futhi alilinganiswa nokuheha okubonakalayo komkhiqizo. Kufana nokusho ukuthi owesifazane ozilungisile uchwepheshe kakhulu kunomunye ngenxa yokubukeka kwakhe. Isoftware iyafana nabantu: okubalulekile ingaphakathi.
Yeka ukuthathwa kangaka ukubukeka bese usebenzisa ubuchopho bakho. Awukwazi ukuqhubekela phambili ngaphandle kokugibela amahlombe omunye umuntu. Amagunya obunikazi weSoftware akufanele abekhona. Ungakudala kanjani okuthile okusha uma ungavunyelwe ngisho nokwakha lokho okuvele kukhona? Ngabe imibono ngeyomunye umuntu? Awukwazi ukulindela ukukhombisa okuthile okuhle kuzithameli futhi ungabi nomuntu kulezo zilaleli alingise.
Phendula uKevin Perez
Ngiyavumelana nayo 🙂
Vele, azifanele zibe khona kepha uma uthatha okuthile kumuntu kufanele okungenani uqaphele ukuthi awusungulanga wena kepha ukuthi wakuthuthukisa futhi wanikeza udumo kulowo owasungula kungafani ne-Apple, abalandeli bayo abaningi bakholelwa ukuthi I-Smartphone yasungulwa yi-Apple futhi akufani nalokho, i-Smartphone yayivele ikhona, bayithuthukisa futhi abanikanga ngisho abasunguli isikweletu futhi maqondana neWintendo yebo kungaba ngcono kubo ngaleyo ndlela bebengeke bayikhokhe i-patent futhi bangasho ukuthi bayisungule njengoba kwenzeka e-Office 2003.
Usho ukuthini nge-primitive? Uma i-CERN collider isebenzisa i-linux ngokuya ngezinhlelo zayo, ayisebenzisi iWindows noma i-Apple, kunjalo, njengoba ingenamandla wezomnotho wokukhangisa kwi-OS yayo, lokhu akwaziwa kangako, kepha leso sizathu kukhona i-inthanethi ukuthola ezinye izindlela kumasistimu aphephe kakhulu kuneWindows ne-Apple.
Kufana ... konke okudala kangangokuba sekuvele kunezindlela eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili zokwenza konke lokho ngaphandle kweWindows.
Iqiniso lizokukhulula kusho
Isizathu esiyinhloko sokungasebenzisi noma yini kusuka ku-apula, i-microsoft, noma i-google, kungenxa yokuthi angifuni ukuxhasa ubushiqela nobufasizimu. iphuzu lokugcina
Abalandeli, yekani ukufunda!
PS: Inhloso yami akukhona ukudala impikiswano, kepha kunezinto okufanele zivezwe kanjena, bese wonke umuntu ezokuthatha ngendlela athanda ngayo
Ukuze usebenzise i-OpenBSD, kushiwo.
UJUAN FELIPE ROSENDO kusho
I-BLOG YAKHO IKHULU KANYE NOKUTHI UKUPHAWULA AKUDLULI UKUTHI IQINISO ELIMsulwa NOKUQINISEKA KWE-RAW, NGINGUMSEBENZISI WAKWA-FERREO WE-LINUX NE-MAC OS, KODWA ANGEKE NGISEBENZISE UKUTHI KUNGANI BABIWA AMAWINDI. KUHLE KUWE MFOWETHU KUSENABANTU ABASALUNGISELELE KULESI SIHLOKO HHAYI HHAYI ABANCINCI BESIKOLE BESIKOLO ABANIKEZA ISIJALO KUPHELA .. NGIBINGELELA ..
Phendula kuJUAN FELIPE ROSENDO
IMicrosoft ayazi ngempela ukuthi ingawagcina kanjani amanga, futhi iyantshontsha kuphela
Ngicabanga ukuthi kwenzeke okusobala kakhulu kuwe. Awucabangi ukuthi isikhombimsebenzisi se-win8 / 8.1 sifana ncamashi nendlela yokufaka izinhlelo ku-gnome 3 noma ebunyeni?
Hheyi, ngabe kukhona owaziyo lapho azi khona ukuthi kukhona yini okufana ne- "new copier" yamawindi 8 kepha eyamawindows 7 ???
IVLC 2.0 isivele ine-RC (i-iOS, i-Android, iMac, iLinux neWindows)
Bamba iqhaza futhi wakhe ubuciko obusha beDebian Wheezy